Daba dhilif waashoow aduunyada warbaa yaal aakhirana waxbaa jira
Mahad balaarina waxay u sugnaatay Allah unkay koonka, taagay Cirka tiir la, aan nabad galyo iyo naxariisi Nabi Muhammad dushiisa ha ahaato.
Intaa ka dib maqaalkan la magacbaxay “daba dhilif waashayoow aduunyada warbaa yaal aakhirana waxbaa jira”, waxaan ku gorfayn doona/hadli doonaa,dabacsanaanta iyo dadnimo xummida dhamaan dabadhilifyada soomaalida, mana jirto cid gooni ah ee aan ku bartilmaameedsanayo, ama aan ula goleeyahay, waxaa intaa dheer daba dhilif iyo jaasuus ma,aha wax iminka bilaabmaya ee waa wax soo jireen ah ilaa iyo aadam,maantana way jiraan wayna jiri doonan .Hadaba waxaa iga afeef ah in aanan loo fahmin si khalad ah ama ruux uunan si gooni ah iskugu qaloocin,maxaa yeelay dabadhilif iyo jaasuus,qabiilkoodu waa qadada iyo xoogaga la siinayo oo ay ku iibsanayaa diintooda iyo dalkooda.
Dunida aanu ku noolnahay dacalkeeda waxaa ragaadiyay colaad, aafooyin iyo dhibaatooyin ku habsaday shucuub iyo dowlado intaba, hadaba umada soomaaliyeed waxay ka mid tahay dadyowga ay halakeeyeen dhibaatooyinku. Umad waliba waxay leedahay geesiyaal u sara kaca kana dhiidhiya dhib kasta oo soo wajaho ama cadow kasta oo u soo qaato heeryihiisa in ay u huraan naf iyo maal intaba, kana xiga gumaysiga in ay iil u hoydaan, sidoo kale waxaa jira madamqadayaal, dawdaro waalan ah oo soo diyaarsho xariga lagu dabayo walaakood, kuna iibsada diintooda iyo dalkooda xooga sunuud ah.
Hadaba qoromadaan waxaan ku soo qaadan doona dhacdo tilmaamaysa dullinimada iyo dacfiga daba dhilifyada (qabqablayaasha) Somalida magacay rabaan ha hugsanadaane, kuwaas oo agabka u sido kuwii dooxay umulahoodii, dilayana gabdhohoodii, culimadii diinta, abwaanadii dalkoodii iyo aqoonyahankii. Waxaa dhacday shir ka mid ah shirarkii ay is kugu imaanjireen daba dhilifyada sheegto mas'uuliyiinta, ayaa waxaa la soo xiriiray raisulwazaraha Ethiopia Males Zenawi, waxaa telephone ka qabtay mid ka mid ah dabadhilifyadii shirka ka qaybgalayay halka saaxiibadiisi kalena ay dhagta u taagayeen waxa ay ka wada hadlayaan, hadaba inta uu la hadlayay Zenawi ma uunan oran wax aan ka ahayn “haa, haa, haa” isku xik xikta oo aneey u dhexeyna maya. Hase yeeshee mar ayuu ku dhiiraday in uu “Maya” yiraahdo si kadis ah.
Waxay la yaab iyo filanwaa ku noqotay ragii kale oo asxaabtiisa ahaa sida geesinimada iyo dadnimada leh ee uu ugu dhiiraday in uu “Maya”yiraahdo. Dabadeedna waxay waydiiyeen sideed ugu dhiiratay in aad Mr. Zenawi maya ku tiraahdid?
Wuxuu ku jawaabay qabqablihii; wuxuu i waydiiyay sayidkaygu ilaah cimrigiisa ha dheereeye ab ka abe iyo inta ku abtirsatabee, waxaad ku celcelisay “haa, haa, haa,”in ka badan konton jeere (50) ee miyaadan ku daaleeyn? Markaas ayaan ku iri “Maya” sayadii waxaas oo dhan waxaan u samaynayaa adiga daraadaa.
Hadaba su, aasha is waydiinta mudane waxay tahay, maxaa ka dhigay dabadhilifyada soomaalida kuwa u dulaysan aadna uga baqa Males Zanewi? Maxay u awoodi la, yihiin in ay diidaan damcigiisa gumaysi doonka ah? Maxay u awoodi la, yihiin in ay mar uun maya yiraahdaan? Xiitaa si kaftan ah? Maxaa ka jaraysiiya hadii ay maqlaan codka Males Zanewi? Maxaa keenay in masaalixda soomaalida looga soo yeeriyo Adissababa? Muxuu askari dabla ahi u maamulayaa? Jawaabta su'aalahaasi aad ayay u sahlantaahay, waxaana jirin rabitaan shacab, maxaa yeelay markii horeba kuma aynan iman aqoon, caqli iyo doonid bulasho intaba, oo waxay ku yimaadeen dab iyo baaruud, waxaa soo caleemo saartay cadowga aana marnaba doonayn jiritaankooda, sidaa aawgeed ma haystaan wax kalsooni ah oo ay ku wajahaan culayska uga imanaya dibada, sidaa ayay ku noqdeen adoomo dulli ah oo u nacamleeya cadowga.
Goorma ayay ogaan doonan in lama huraanku uu yahay dadkooda, ma qabriga ayay ku fahmi doonan, mise wacdaraha aduunka ayay wax ku qaadan doonan? Waqti intee la, eg ayay u baahanyihiin? Wali towbadu way furantahay, hadiise ay soo noqon wayaan muxuu noqondoonaa cawaaqibkoodu? Hadal abwaan tiriyay ayaa wuxuu ahaa “sideey diintu nagu tiri dawa malaha aakhiro Nin dalkiisii iibsaday oo dadkiisii wada cunay naarboow dambeeyso”.
Taariikhdu iyadaa is qorto, ruux waliba waxaa lagu qori doona labada buug midkood, in lagu qoro buuga dahabkaa ee ilaah uu la doonay kuwa xaqa u dagaalama duligana anan aqbalin, difaacana diintooda, dadkooda iyo dalkooda, cidna anan uga hibaysaan rabitaanka shacabkooda, cadowgana bara baaruud kulul iyo bilaawaha labada afleh.kuwaas oo runahaantii aduunkana sharaf iyo karaama ku noolaada, aakhirana baraara iyo kuwaara janatul fardowsa,kuwa ka dambeeya ee ku abtirsadana ay ku naaloodaan sharaftii iyo karaamadii ay u soo hooyeen dadkooda iyo dalkooda.
Hadaba dabadhilifyada dugsiga mooday Xabashida ee ka leexday dariiqii rasuulka, dhaqankii ka talaabsaday, dalkoodina gatay, dadkoodii iibsaday, ee soo afeeysanaya mindidii lagu dili lahaa, woloow horay loo yiri “Nin abeeso koriyoow adigaa u aayi” Iyana waxaa lagu qorayaa, diinlaawayaashaas daba ordaaya cadowgooda diiwaanka madow ee u gaarka ah .Aduunyadana waxay ku noolanayaan dulli, waxayna uur ku taalo iyo dhag xumi u tahay kuwa ka dambeeya ee u nisbada sheegta, aakhirana naarboow dambayn.
Waxaan ku soo qaadanaynaa maqaalkan tix uu tiriyay abwaan C/llaahi Suldaan Timacade laguna magacaabo “kala qaayo fogaa.” Wuxuu abwaanku ku dhaleecaynayaa arar gaaban dabadeed, dadka gumaysi raaca ah ee danaystannimmadu dhaxalsiisay inay danaha ummaddooda ka soo horjeestaan, xiliyadii la dagaallankii gumaysiga.Wuxuu yiri:
Hadaba guntii iyo gabagabadii maqaalkayga, waxaa waano iga ah in soomaalidu meel uga soo wada jeesato kuwa heeryahooda cunay ee iibsaday diintoodii, dalkoodii, gumaadaya dakoodii, oo ay meel iskaga tuuraan kala qoqobka iyo is jiidjiidka anan macnaha ku dhisnayn.
Weedh abwaan tiriyay ayaa waxay ahaayd “walaalahaan war kala maqlin wakhti badan ma waaraan, warasada aduunyada iyo xoolo wacan ma yeeshaan, wadna wuu helaayo way xabaalo badiyaan”.Hadii lakala qoqobnaado oo anan laga shaqayn midnimada iyo wada jirka oo aan layska tuurin waranka qabiil iyo wargaafeedka dhaxdeen ah ee aan gacmaha lays qabsan, gumaysiga nagu wiirsanayana aan meel looga soo wada jeesan, aad ayay u adkaan doontaa in lagaaro xornimo lagu waaro.
Hadiisi aan isku duubnaano oo aan ka tashano cadaawada gumaysiga faca wayn ee nabaday waxa aan kujirno manta iyo kuwa horboodaya ee aan naas nuujinayno in aanan kulladi doonin xornimo. Xornimo anaanan dhiig loo hurina sahal laguma helo.Horay ayaa abwaan u yiri “dhabaqoodhi waashoow aduunyada warbaa jira aakhirina waxbaa yaal, weyga yaal aduunyada aan wax kaaga sheegee, inta aad wayahaan waabaryaba u nacamlayn oo walaalkaa u soo xiri, wadkii adi ku dilayaa harag waxaan u gogashoo, wakhti aan fogayn buu wadnaha ku jarayaa, waa waxaad aloostee waa in aad ka wabaxdaa. Aakhirana waxa kuu jira aan wax kaaga sheegee, wajigii ilaaheey arki maysid waligaa, waadiyaha cadaabkaa adigaya wayaanuhu (tigree) ku dhax waalan doontaan”.